Induction Soldering Copper Wire Connectors Maitiro
Chinangwa chemubvunzo uyu wekushandisa ndechekutarisa nguva yekupisa yekuitisa emagetsi emhangura waya zvinosanganisa netambo yemhangura. Mutengi anoda kutora kutsiva kwemaoko nemidziyo yemagetsi, ine induction kutengesa. Hand soldering inogona kushanda zvakanyanya, uye inokonzeresa mutengesi inosanganisirwa zvakanyanya nehunyanzvi hweanoshanda. Induction kutengesa inobvumira kudzora maitiro ekugadzirisa, uye inopa mhedzisiro inoenderana.
DW-UHF-6KW-III yakabata ruoko induction brazing heater
• Copper coaxial tambo
• Akarukwa emhangura zvokubatanidza
• Copper bullet-yakavezwa yemukati yekubatanidza
• Copper pini-yakadzvanywa chomukati chinongedzo
• Solder waya
• Carbon simbi
Muedzo 1: Kutengesa Copper Coax Center Conductor kune Bullet-Shaped Center Pin
Kupisa: ~ 400 ° F (204 ° C)
Simba: 1.32 kW
Nguva: 3 masekondi ebhurufa kubatanidza
Muedzo wechipiri: Kutengesa Copper Coax yepakati conductor kune Inaliti-Yakaumbwa Center Pin
Nguva: 1.5 yechipiri kwechengeti yenaliti
Bvunzo 3: Soldering Copper Coax kusvika kuKupedzisira Kubatanidza (Bullet-Shaped Center Pin)
Simba: 1.8 kW
Nguva: makumi matatu masekondi ekudziya nguva, inoteverwa negumi chechipiri kutonhora kutenderera
Kwayedza 4: Kutengesa Copper Coax kusvika kuKupedzisira Kubatanidza (Inaliti-Yakatemwa Chikamu Pini)
Kune yega yega rudzi rwepini yepini, maitiro ekutengesa ane matanho maviri. Kutanga, kutengesa yepakati pepini (bullet-yakamisikidzwa kana tsono-yakatemwa) kune yepakati conductor ye coaxial tambo; uye chechipiri, kutengesa coaxial tambo ne pini mune yekupedzisira chinongedzo
Muedzo 1 na2: Kutengesa mhangura coax yepakati conductor kune yekubatanidza yepini pini
Pini yekubatanidza yemukati (sindano uye bullet yakatevera maitiro akafanana) yakaunganidzwa kune coaxial cable Center conductor. Mutengesi anotengesa slug akaenzana length kureba kwepini uko waya inotengeswa, yakatemwa ndokuiswa mukugumisa kwepini. Iyo mhangura inoitisa coax yakanga yakarongedzerwa kuzorora pane mutengesi slug mupini ine mwenje kumanikidza pasi.
Iyi gungano yakaiswa mune maviri-kutendeuka induction coil, uye simba rakashandurwa.
Mutengesi paakanyungudika, mutungamiriri wemhangura weiyo coax akagara mukati kati yepini. Gungano rakaitwa richiri kwemamwe masekondi akati kuti mutengesi zvaripora. Tarira: zvakakosha kuchengeta mutengesi achibatanidza kusvikira wapora. Kana kufamba kukaitika, "chakatonhora" mutengesi chinjo chinogona kuguma.
Kwayedza 3 ne4: Kutengesa mhangura screw-Type end connector kune Center Pin
Solder waya yakakuvadzwa kutenderedza mafurati etoa. Iyo coax ine mutengesi yakaiswa mune yekupedzisira chinongedzo.
Iyi gungano yakaiswa mu-yakatemwa induction coil, uye simba rakashandurwa.
Nguva yekushisa - masekonzi makumi matatu kwemasangano ese anoteverwa negumi chechipiri kubata kuti alloy isimbe.
Kutengesa kwakabudirira, uye kwakasimbisa kuti induction kutengesa mhangura waya zvinamanishoni ndiyo yakasarudzika nzira yekubata nekutengesa.
Kudzokorora maitiro, kwete anoshanda anovimba
Kupisa kwakachengeteka pasina mirazvo yakavhurika
Simba rinoshanda kupisa
Categories Technologies Tags High frequency soldering wire, induction kutengesa zvinosanganisa, induction soldering machine, soldering mhangura, waya yemhangura yemhangura, Kutengesa Copper Wire Connectors, waya dzemagetsi dzemhangura, kutengesa induction Post navigation